လယ် ကွင်း ထဲ က လို ပွဲ – Hlataw.com
ဒီနေ့ လုပ်စရာလေး နဲနဲပါးပါး လုပ်ပြီး လယ်တဲထဲ ဆေးလိပ် တိုလေးနဲ့ မှိန်းနေတုန်း ဗြုံးဆို ခင်လှ ပေါက်ချ လာတယ်။ မျက်စိတဆုံး မြင်နေရတဲ့ လယ်ကွင်းပြင် ကို ငေးပြီး ဟိုတွေး ဒီတွေး တွေးနေတာမို့ ဒီကောင်မ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်လာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဦးမောင်လှကြီး ဆိုပြီး ကျုပ်နာမည်ခေါ်လို့ လယ်တဲထဲ ဝင်လာမှ တွေ့လိုက်တာ။ ခင်လှ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ရွာထဲက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မုဆိုးမ ဖြစ်နေတာ။ ပြောရရင် ကျုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖူးတဲ့ မတူး တို့နဲ့ အရွယ်တူပေါ့။ သူ့လင်က မနှစ်က ကျုပ်လို ပိုးထိတာ။ ကျုပ်က ကံကောင်းလို့ မသေပေမဲ့ သူ့လင် ကိုထွန်းသောင် ကတော့ ကုလို့ မမှီလို့ အသက်ပါ ပါသွားတာ။ အိမ်ထောင်ကျတာဖြစ် တနှစ်ကျော် နှစ် နှစ် အများဆုံး ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်။
ခုတော့ မုဆိုးမ ဖြစ်ပြီး သူ့တယောက် ထဲ ဖြစ်သလို ရုန်းကန်နေလေရဲ့။ “ဟဲ့ ဘာတုန်းဟ” သူခေါ်တော့ ကျုပ်ကလဲ ပြန်ထူးပြီး ဝင်လာတဲ့ ခင်လှ ကိုကြည့်မိတယ်။ ဒီကောင်မ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပြီ၊ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး နဲ့ ကြည့်လို့ ကောင်းသား၊ ရွာသူဆိုတော့ ထမီက တိုတို၊ ပုဝါစုတ်လေး ခေါင်းပေါင်းလို့၊ ဝလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ရင်ဖုံးအကျီက ခပ်ကြပ်ကြပ် ဖြစ်နေတော့ သူ့ရင်ကို မနဲတင်း အောင် ဆွဲထားသလိုဖြစ်ပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးနဲ့ဖေါင်းနေတာ ကြည့်လို့တောင် ကောင်းသေး။ “ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဦးမောင်လှကြီးရေ… အားနေတာနဲ့ လျှောက်လာတာ.. ပြီးတော့ ဦးမောင်လှကြီးကိုလဲ မေးစရာ ရှိလို့” “ဘာမျာလဲဟ” “တခြားမဟုတ်ပါဘူး… ဒီနှစ် ဦးမောင်လှကြီး လယ်မှာ ကောက်စိုက်ဘို့ လူပြည့်သွားပြီလားလို့” “ဘာလဲ နင် ငါ့လယ်မှာ လာစိုက်မလို့လား” “အင်း.. အဲဒါလဲ လာမေးတာ” “ဒါဆိုရပါတယ်… အချင်းချင်းတွေဘဲ.. လာစိုက်” “ဒါဆိုလဲ ကျေးဇူးပါဘဲတော်” ပြောရင်း ဆိုရင်း ခင်လှက ကျုပ်ဘေး ဝင်ထိုင်တယ်။
ပြီးတော့ ခေါင်းမှာ ပေါင်းထား တဲ့ ပုဝါကို ဖြုတ်ပြီး မျက်နှာကို ဟိုတို့ ဒီတို့ လုပ်ရင်း “မိုးဦးကျသာ ဆိုတယ် ခုထိ ပူတုန်း” “အေးဟ ပူလွန်းလို့ ငါတောင် အဝတ်မကပ်နိုင်ဘူး… ဒီလို အပူမျိုးနဲ့ ဒီနှစ် ရေတောင် တင်ပါ့မလားဘဲ… မိုးကလဲ နည်းလိုက်တာ” ကျုပ်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်း တယောက်ထဲလဲ ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ အပေါ်ပိုင်းက တုံးလုံး၊ လုံချည်တိုကိုတော့ ပေါင်ကြားစုထည့်လို့ တင်ပလင်ခွေ ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ် ထိုင်နေတာ။ “ဟုတ်တယ်နော် ဦးမောင်လှကြီး… ခါတိုင်း ဒီအချိန်ဆို မိုးကကောင်းကောင်းရွာနေပြီ… ဒီနှစ်မှ မိုးကလဲ နောက်ကျလိုက်တာ” ပြောရင်း ခါးလောက်ဘဲ အဝတ်ရှိတဲ့ ကျုပ်ခန္တာကို မျက်လုံးဝေ့ကြည့်တာ သတိထားမိတယ်။
ဒီကောင်မ ဒီကိစ္စ တခုထဲနဲ့တော့ ငါ့ဆီရောက်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒီကိစ္စက ရွာထဲတွေ့ လှမ်းမေးလိုက်လဲ ရတဲ့ဟာကို ဘာကြောင့် ခြေရှည်ပြီး ငါ့လယ်ထဲထိ ရောက်လာလဲ မသိဘူး၊ တွေးမိပြီး စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်တယ်။ “တွေ့တုန်းစပ်စုအုံးမယ်… နင်ကိုကြည့်ရတာ ချောလို့လှလို့ အရွယ်ကလဲ ငယ်… ရုပ်ရည်လေးကလဲရှိ… တယောက်ထဲ ရုန်းကန်နေရတာ မပင်ပန်းဘူးလား… တပင်လဲ တပင်ထူ ဘို့ မစဉ်းစားတော့ဘူးလား” “အမလေး ပြောမှ ပြောတတ်တယ် ဦးမောင်လှကြီးရယ်…ကျမလို မုဆိုးမ ဘယ်သူယူမတုန်း” “ဟ မုဆိုးမဆိုပေမဲ့ နင်က လှတုန်းပတုန်းဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့သူပေါ်ပြီး ယူမဲ့သူရှိမှာပေါ့ဟ” “မရှိပါဘူးတော်… မုဆိုးမဆိုမှ ဘယ်သူက ယူမလဲတော့… ပီးတော့ ခင်လှက ဘာလှလို့လဲ… ရွာထဲက အပျိုတွေက ခင်လှထက် အများကြီးသာပါ့တော်.. ယူချင်းယူ သူတို့သွားယူမှာပေါ့” “အေးလေ ဒါလဲဟုတ်တာဘဲ.. မုဆိုးမဆိုတော့လဲ ခက်သား.. နင်ကလဲ ကံဆိုးပါတယ်… နင့်ယောက်ကျားက ပိုးထိတာ အသိနောက်ကျလို့ ဖြစ်သွားတာ.. ငါ့လိုသာ အသိစောရင် ကုရင် မှီတယ်” “ကုသိုလ်ကံပေါ့ ဦးမောင်လှရယ်.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ” ကျုပ် အဖြစ်နဲ့ယှဉ်ပြောရင်းနဲ့ ကျုပ် မအေးကို ရုတ်တရက် သတိရသွားတယ်။
ခင်လှ သူလဲ မအေးလို ဖြစ်နေလို့ များလား၊ ဒါကြောင့် သူ မုဆိုးမ ဖြစ်တာထင်တယ်။ စဉ်းစားမိတာနဲ့ လွှတ်ကနဲ ပါးစပ်က ထွက်သွားတယ်။ ကျုပ်ဝသီ ကိုက ဒီလိုဘဲ၊ “ငါ အခုမှ စဉ်းစားမိတယ်.. နင်မုဆိုးမဖြစ်တဲ့အကြောင်း..” ပြောရင်းတမ်းလမ်း ကျုပ်တိကရဲ ရပ်သွားတယ်။ ဟိုက် သူက မိန်းခလေး ပြောလို့ မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်လို့ စဉ်းစားမိပြီး စကားကို လျှောချလိုက်တယ်။ “အာ… နင့်ကို ပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး… နင်လဲ သိချင်သိမှာပေါ့” “ဘာများလဲ ဦးမောင်လှကြီးရဲ့.. ကျမက ဘာသိရမှာလဲ” “အေး အေး မသိလဲ ပြီးရော.. ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး” ကျုပ်ဖာသာကျုပ် အတွေးပေါက်ပြီး ပြုံးစိစိ နဲ့ သူ့ကိုပြောတော့ သူက ပိုသိချင်တယ်နဲ့ တူတယ်။
အတင်း မရမက မေးတော့တာဘဲ။ “ဘာလဲ ဦးမောင်လှကြီး… ပြော ပြော” “အာ နင်ကလဲ ပြောလို့ မကောင်းပါဘူးဆိုမှ အတင်းမေးတော့တာဘဲ” “ဘာလို့ပြောလို့ မကောင်းရမှာလဲ.. ဘာအကြောင်းမို့လဲ ပြော ပြော” “ဟ နင်သိပြီးသားလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ သူကလဲ အတင်းမေး၊ ကျုပ်ကလဲ ဒါဘဲ အပ်ကြောင်းထပ်ပြောရင်း ဂျာအေး သူ့ အမေရိုက်တဲ့ ဇတ်ခင်းနေတာ အတော်ကြာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ “ကဲ နင်ဒီလောက်သိချင်နေတာ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ပြောရတာပေါ့… နောက်မှ ငါ့ကို အဆိုးမဆိုနဲ့” “မဆိုပါဘူး.. တခါထဲ ပြောဆိုမပြောဘူး ဈေးက ကိုင်နေသေးတယ်” “အော် နင်ကလဲ ပြောသင့်လား မသင့်လားလဲ ရှိသေးတယ်လေဟာ” “အမလေး ဒီလူနဲ့ ဒီလူ.. ပြောပါဆိုမှ ရှည်နေသေးတယ် တခါတည်း” “ကဲ ဒီလောက်သိချင်တာ ပြောမယ်” ဆိုပြီး အော်ပြောရင်တောင် ဘယ်သူမှ မကြားတဲ့ နေရာမှာ သူ့ အနားနဲနဲတိုးလို့ လေသံကို နဲနဲနှိပ်ပြီး “နင် မုဆိုးမဖြစ်တာ နင့်ဟိုဟာမှာ မှဲ့ပါလို့မဟုတ်လား” “ဘယ်လို ဘယ်လို ဦးမောင်လှကြီး ဘယ်ဟိုဟာလဲ” “အာ နင်ကလဲ.. နင့်ဟိုဟာပါဆို.. နင့် မိန်းမဟဝှာလေဟာ.. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကဲ ပြော” ကျုပ်အပြောကို ခင်လှ ဘာသဘောကျတယ်မသိ၊ တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း ပြန်ပြောတယ်။
“ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်.. ဦးမောင်လှကြီးကလဲ… ကြံကြံဖန်ဖန် လာပြောပြန်ပြီ” “ဟဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟ.. ငါ့ကို မှဲ့ကျမ်းကြေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သေချာပြောပြသွားတာ… အဲ့နေရာ မှဲ့ပါတဲ့ မိန်းမတွေက ယောက်ကျားယူရင် မုဆိုးမ ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့… နင့်မှာ ပါတယ်မို့လား.. ငါ့ကို မရှက်နဲ့ မှန်မှန်ပြော” “ဘယ်ကလာ ဦးမောင်လှကြီးများ ဘာရှက်ရမှာလဲ… အဲဒီနေရာမှာတော့ မပါ ပါဘူးတော်… ကျုပ်တကိုယ်လုံးမှာ မှဲ့က ရင်သားမှာသာရှိတာ… ရှိတာမှ သေးသေးလေးတောင် မဟုတ်ဘူး ထင်းနေတာ.. ဟောဒီနေရာမှာ” ခင်လှက သူ့မှဲ့ရှိတဲ့ ညာဘက်ရင်သားနေရာကို အင်္ကျီပေါ်က လက်ညိုးနဲ့ ထောက်ပြရင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောတယ်။ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းမရှိ။ မုဆိုးမ မို့လားတော့ မသိ၊ ကျုပ်ကလဲ အဲ့လို ပွင့်လင်းမှ သဘောကျတာနဲ့တော့ အံကိုက်။
“ဒါဆို နင်မုဆိုးမ ဖြစ်တာ အဲဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်.. ကံတရားကြောင့်ဘဲလို့ ပြောရတော့မယ်ထင်တယ်… နင့်ယောက်ကျား ထွန်းသောင် ဆုံးတော့ နင်တို့ ညားတာ တနှစ်ကျော်ကျော်ဘဲ ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်” “အင်း တနှစ်နဲ့သုံးလဘဲရှိသေးတာ…ခင်လှ ကံကို ဆိုးပါတယ်” “အေးပေါ့ဟာ.. သတ္တဝါတခု ကံတခုပေါ့… ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ.. ဒါနဲ့ တခါတလေ နင့်ယောက်ကျားကို သတိမရဘူးလား” “ရတာပေါ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ.. မေးမှ မေးတတ်တယ်” “ဟဲ့ ငါပြောတာ ဟို ရိုးရိုးသားသား သတိရတာ မေးတာမဟုတ်ဘူးဟ” ကျုပ်က ရယ်ကျဲကျဲ နဲ့ သွေးတိုးစမ်းလိုက်တယ်။
ခင်လှက ကျုပ်ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ လှမ်းမေးတာကို သဘောပေါက်ပုံနဲ့ ကျုပ်ပေါင်ကို လှမ်းရိုက်ရင်း “ဦးမောင်လှကြီး” လို့ သဘောပေါက်ပုံနဲ့ ကျုပ်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် လေသံနဲ့ ကျုပ်ကိုလှမ်းအော်တယ်။ အော်တယ်သာပြောသာ လေသံက မကြိုက်တဲ့ အသံမဟုတ်မှန်း ကျုပ်ချက်ခြင်းသိလိုက်တာကြောင့် အလျှော့မပေးဘဲ “ဘာလဲဟ.. ငါကသိချင်လို့” “ဘာလို့ သိချင်ရတာလဲ” “အော် ငါတို့အဖြစ်နဲ တိုက်ဆိုက်သလားလို့” “ဘာအဖြစ်လဲ” “နင်သိတဲ့အတိုင်း သန်းမြလဲ ယောက်ကျားနဲ့ကွဲပြီး ပြန်ရောက်လာတာမို့လား… အဲဒီမှာ သူလဲ ခနခန သတိရပြီး ငါနဲ့ညားတာလေ… ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောင်လှကြီးကတော့ ပြောပြီ… သန်းမြတော့ ဟုတ်တာပေါ့ … ကျုပ်မှာတော့ သတိရလဲ ညားမဲ့သူမရှိပါဘူးတော်” “ပြောပါ နင်တကယ်သတိရလား” ခင်လှ ချက်ခြင်း မဖြေ၊ ကျုပ်ကို လှမ်းကြည့်တယ်။
ကျုပ်ကလဲ ခင်လှကို ကြည့်တယ်။ ကြည့်ရင်း ကျုပ်ရင်ထဲ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သွေးပူလာသလိုဘဲ၊ ပြောင်ကြီးတောင် နဲနဲတင်းလာတယ်။ ကျုပ်တို့ အချင်းချင်း မျက်စိချင်း ခနဆုံပြီး ခင်လှ ပြုံးတုန်းတုန်း လုပ်ရင်း ဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်။ ပြီးတော့ “ရတာပေါ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ.. မရဘဲ နေမလား… ဟွန်း ဘာတွေ လျှောက်မေးနေမှန်း မသိဘူး… မပြောလိုက်ချင်ဘူး” တဲ့ကျုပ်နဲနဲ သဘောပေါက်သွားတယ်၊ လူသူမနီးတဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ ကျုပ်နဲ့ ခင်လှ နှစ်ယောက်ထဲ။ သူ့စိတ်ထဲလဲ တခုခု ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကျုပ်သိလိုက်ပြီ၊
“ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ.. ငါသိတယ် ငါသိတယ်” ကျုပ်က ရယ်ကျဲကျဲ နဲ့ လှမ်းပြောလိုက်တော့ သူက “ဘာသိတာလဲ… ဦးမောင်လှကြီးနော်” “နင်သတိရတာ ကိုပြောတာလေ ငါသိတာပေါ့…. ထွန်းသောင်ကြီး အကြောင်း… ဒီကောင်လား အရင်က ငါတို့ သူ့ကို ထွန်းတောင်လို့ ခေါ်တာ… တောင်လွန်းလို့ မိန်းမ မြန်မြန်ရတာလေ ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောင်လှကြီးကတော့ ပြောပြီ ခစ် ခစ်” “အမယ် ငါပြောတာ မဟုတ်တာကျနေတာဘဲ… ကဲပြော တနေ့ဘယ်နှစ်ခါလဲ ဟား ဟား ဟား” “သွား . . ဦးမောင်လှကြီးရော မတောင်တာကျနေတာဘဲ.. တောင်လွန်းလို့ သန်းမြနဲ့ ညားတာမဟုတ်ဘူးလား” “ဟား ဟား ဟား ဟား အေးပေါ့ဟ” “ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီး ပုံကြည့်တာနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်မှန်း လူတိုင်းသိတယ်.. ဒါကြောင့် ရွာထဲက ကောင်မတွေ ပြောနေကြတာ ဒီလောက်ထတဲ့ သန်းမြ မောင်လှနဲ့တွေ့မှ ငြိမ်ကျသွားတာတဲ့ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ရွာထဲကကောင်မတွေ တကယ်ပြောတာလား၊ ခင်လှဘဲလုပ်ဇတ်ထွင်တာလားမသိ။ ဒီအပြောနဲ့ဆို အခြေနေက ကောင်းမှန်း ကျုပ်သိလိုက်ပြီ။ “ဟား ဟား ဟား ဟား နင်ပြောတာမှန်တယ်… အခုတောင် နင့်နဲ့ တွေ့ပြီး တောင်နေပြီနော်” တဟားဟားနဲ့ စသလိုနောက်သလို ပြောရင်း သူ့လက် လမ်းဆွဲလိုက်တယ်။
“အဲ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ….” သူ့လေသံ မဆုံးခင်မှာ ကိုယ်ပါလှမ်းဖက်လိုက်တော့ ခင်လှက လေသံခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ “ဦးမောင်လှကြီးရယ် ခင်လှကို အထင်တော့ မသေးပါနဲ့နော်” ညင်းတာတော့ မဟုတ်၊ သူ့ပုံက ခံလဲခံချင်တယ်။ အထင်သေးမှာလဲ စိုးတဲ့သဘောလို ဖြစ်နေတာမို့ “မသေးပါဘူးဟာ… ငါ နင့်ကို နားလည်ပါတယ်…. ငါလဲ နင့်လိုပါဘဲဟာ” “ဦမောင်လှကြီးကလဲ ပြောပြီ.. ဦးမောင်လှကြီးက မိန်းမနဲ့ဟာ” “မိန်းမနဲ့ဆိုပေမဲ့ ခုသန်းမြက ငါကို အနားမကပ်မခံတော့ဘူးဟ” “ဒီလောက်တောင်တဲ့သူ အနားအကပ်မခံဘဲ နေမလား.. လျှောက်ပြောနေ” “နင်မသိပါဘူးဟာ… ငါတို့အကြောင်း… သန်းမြက အခုတလော ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး.. ငါ့ကို အကပ်ကိုမခံတော့တာ.. သူရိုးသွားလို့နေမှာပေါ့” “ဒါကြောင့် ခု ခင်လှကို လာကပ်တာပေါ့လေ ဟုတ်လား” “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဒါကတော့ နင်နဲ့ငါက လိုအပ်တာချင်း တူနေတာကိုး… လူဆိုတာ လိုအပ်တာတူမှ ပေါင်းလို့ရတာဟ” “ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီးက ပြောတတ်တယ်” “ဟဲ့ ငါပြောတာ မဟုတ်လို့လား…. လာ လာ ငါ့ပေါင်ပေါ် အိပ်ချလိုက် တော်ကြာ အဝေးက တယောက်ယောက်ဖြတ်သွားရင် နှစ်ယောက်ပူးနေတာ မြင်သွားလို့ လာစပ်စုနေအုံးမယ်” “ဟွန်း ဦးမောင်လှကြီးက ရိုးမလိုလိုနဲ့ ဥာဏ်ချည်းဘဲ” ပါးစပ်ကသာ ပြောပေမဲ့ ခင်လှက ဘေးဘီ လှမ်းကြည့်ပြီး ကျုပ်ပေါင်ပေါ် လှဲချလိုက်တယ်။
ပေါင်ကြားက ပြောင်ကြီးကတော့ စားရတော့မယ်မှန်း သိလို့လား မသိ တော်တော်လေးကို တင်းနေပြီ၊ ကျုပ်က ခင်လှ ခေါင်းကို သေသေချာချာ ကျုပ်ပေါင်ကြားထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တော့ တင်းနေတဲ့ ပြောင်ကြီးက ခင်လှ ခေါင်းနဲ့ ထိရော။ “အမလေး ဘာကြီးလဲဟ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” “သိချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကြည့်… ငါက ခု နင့် နို့က မှဲ့ကို ကြည့်မလို့” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ပြောရင်း ကျုပ်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းတင်ပြီး ပက်လက်လဲနေတဲ့ ခင်လှ အကျီကို တလုံးချင်း ဖြုတ်လိုက်တယ်။
ခင်လှက ကျုပ်ကြယ်သီး ဖြုတ်နေတာကို မညင်း။ “ဦးမောင်လှကြီးနော်… ခင်လှက ကိုထွန်းသောင် ဆုံးကတည်းက ဘယ်သူနဲ့မှ ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး… အထင်တော့ မသေးနဲ့… ခု ဦးမောင်လှကြီး မို့လို့” “ဒါတွေ ငါနားလည်ပါတယ် ခင်လှရာ… နင်ပြောမနေနဲ့… ခု ငါ့ကို ထွန်းသောင်လို့ဘဲ သဘောထားလိုက်” “ဦးမောင်လှကြီကရော ခင်လှကို သန်းမြ လိုသဘောထားမှာမို့လို့လား” “ငါက နင့်ကို သန်းမြ လို့တော့ သဘောမထားပါဘူး… နင်က ပိုလှနေတဲ့ဟာ… နင့်ကို နင်လို့ဘဲ သဘောထားမယ်” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီး ကတော့လေ ပြောတတ်တယ်” ပြောရင် အင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ပြုတ်တော့ ဘော်လီကို ဆွဲလှန်ရင်း ထင်းနေအောင် ပေါ်နေတဲ့ မှဲ့ကို လက်နဲ့ အသာပွတ်ကြည့်ရင်း “မှဲ့က နင့်ရင်သားမှာ ထင်းကနဲဘဲဟ… ဒါကြောင့်ထင်တယ် နင့်နို့တွေ ထွားတာ.. ငါက အဲလိုမှ ကြိုက်တာ” ပြောလဲပြော လက်က နို့အုံကြီးကို ဆုတ်လို့၊ အိကနဲ အိကနဲ ခင်လှနို့ ကိုင်လို့ကေင်းချက်၊ ကိုင်နေရင်း အားမရတော့ ကုန်းစို့လိုက်တယ်။
“အိ” ခင်လှဆီက အိ ကနဲ အချက်အသံထွက်ပြီး တိတ်သွားတယ်။ ခနလေးကြာတော့ တဟင်းဟင်း နဲ့ အသက်ရှုသံ ခပ်ပြင်းပြင်းထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်က ကျုပ် ခန္တာကိုယ် ကိုဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့၊ နောက် အလိုလို ကျုပ်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်လာပြီး ပြောင်ကြီးကို ဖမ်းဆုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါမှ ကျုပ်ကြိုက်တာ၊ ခင်လှနို့က ထွားကလဲထွား၊ ကိုင်လို့လဲကောင်း၊ စို့လို့လဲ ကောင်းတာမို့ အတော်ကြာတယ်၊ တမောစို့ပြီးမှ “ခင်လှ” “အင်” “နင် ရွာထဲက ရေခဲချောင်းစားဖူးလား” “အင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အော် ငါ့ ရေခဲချောင်း စားမလားလို့” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီးဟာက ရေခဲချောင်းလဲ မဟုတ်ဘူး” ပါးစပ်က ပြောပေမဲ့ ခင်လှ ပက်လက်လှဲနေရာက ကျုပ်ဘဲ စောင်းလို့ ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီးကို မျက်နှာချင်း ဆိုင်လိုက်တယ်။ သေချာကိုင်ကြည့်ရင်း သူ့ နှုတ်ခမ်းကို ဝက်လိုစူလို့ ပြောင်ကြီးနဲ့ တေ့လိုက် ခွာလိုက် လုပ်ကစားနေရင်း “ဦးမောင်လှကြီးရော ဘိန်းမုံ့ စားဖူးလား ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” သူ့အပြောကို ကျုပ် ချက်ခြင်း သဘောပေါက်တာမို့ “ဘာလဲ နင့်ယေက်ကျား ထွန်းသောင်ကြီးက ဘိန်းမုံ့ ကြိုက်လို့လား” “အင်း အရမ်းကြိုက်တာ” “သူကြိုက်တာလား နင်ကြိုက်တာလား” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ကျုပ်ဘာမှမပြောတော့၊ ကျုပ် ခင်လှ ဘေးပြောင်းပြန်အိပ်ချလိုက်တယ်၊ ကျုပ်ခေါင်းက ခင်လှတင်ပါးနား၊ သူ့ ထမီကို ဆွဲဖြေချလို့ ကျုပ်မျက်နှာပေါ် ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ပြောင်ကြီး ခင်လှပါးစပ်ထဲ ရောက်သွားမှန်း ကျုပ်သိလိုက်တယ်။
ခင်လှခြေထောက်တွေကို ကွေးလို့ ကျုပ်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်သလို ပုံစံပြောင်းလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ ဘိန်းမုံ့ကြီးက ကျုပ်မျက်စိရှေ့ ထင်းကနဲ။ ဆုံးသွားတဲ့ သူ့လင် ကြိုက်လဲကြိုက်စရာဘဲ၊ အမွေးတွေထူလပြစ်နဲ့ မဲတူးနေတဲ့ မုံ့မျိုးမဟုတ်၊ အမွေးကခပ်ပါးပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားက ညိုတိုတို ဖြစ်နေပေမဲ့ အကွဲကြောင်းအထဲက နီရဲလို့ အရည်ကြည် တစို့စို့နဲ့ အစေ့ကို ပြူလို့၊ ကြည့်တာနဲ့ ဖိစုတ်ချင်စရာကောင်းနေတာ။ ကျုပ်လဲ သေသေချာချာကြည့်ရင်း သူ့တင်ပါးကို သေချာကိုင်ပြီး ကျုပ်ပါးစပ်ဝ တေ့ချလိုက်တယ်၊ “အီး . . .” ခင်လှဆီက ရုတ်တရက် အသံကြားရပြီး ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ပြောင်ကြီးဆီက နွေးကနဲ နွေးကနဲ နဲ့။ နှစ်ယောက်သား အပေးအယူ မျှနေတာ ဘယ်ညာလူးလို့၊ ခင်လှက အပေါ်ရောက်လိုက်၊ ကျုပ်က အပေါ်ရောက်လိုက်၊ နောက်ဆုံး ကျုပ်မရတော့၊ ခင်လှရေ ငါထွက်ပဟ ဆိုပြီး တဗြစ်ဗြစ် နဲ့ အားရပါးရ ပန်းထွက်တော့တာဘဲ။ အဲဒီမှာ နှစ်ယောက်သား ညိမ်ကျသွားတာ။ခနလောက် ညိမ်နေပြီး “အမလေး ခင်လှရယ် ဘယ်လိုများ စုတ်ထည့်လိုက်တာလဲဟ… ငါတောင် မအောင့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်” ကျုပ်က ငုတ်တုတ်ထထိုင်လို့ မောဟိုက်သံနဲ့ ပြောတော့ ခင်လှက တခစ်ခစ်ရယ်တယ်။
သူ့ပုံကြည့်ရတာ ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ ကျုပ် သူ့ကို လုပ်ပေးတာ ထိမှထိရဲ့လားလို့ သံသယဝင်လာတာမို့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ဟဲ့ နင့်ကိုငါ လုပ်ပေးတာရော ကောင်းရဲ့လား” “ဦးမောင်လှကြီးကလဲ… ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ” “ဟဲ့ ငါလုပ်တာကောင်းမကောင်း သိချင်တာပေါ့ဟ… ပြောစမ်းပါ” “မသိဘူးလား ဒီမှာ ဒီလောက်လူးနေတာ… တခါတည်း လူကို မနားတမ်းလုပ်နေတဲ့ဟာ… ဒီမှာ အသက်တောင်ရှုလို့ မရတော့ဘူး ဟွန်း” ခင်လှက ညုတုတု နဲ့ ပြန်ပြောတဲ့ လေသံကြောင့် ကျုပ်မှာအမောပြေရုံက စိတ်က ပြန်လည်လာသလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။ “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ နင့်ဘိန်းမုံ့က တကယ်စားကောင်းတယ်ဟ… ငါလုပ်တာ နင်ရော ပြီးလား” “ပြီးလိုက်တာမှ ဦးမောင်လှကြီးရယ်.. တရှုးရှုးနဲ့ ပန်းနေတာ ဦးမောင်လှကြီးကို အားတောင်နာတယ်” “ဟဲ ဟဲ ဒါမျိုးက အားမနာရဘူးဟ.. ပန်းသာပန်း… များများပန်းလေ ငါကြိုက်လေဘဲဟ” စကားသာပြောနေပေမဲ့ ခင်လှက ပက်လက်လဲနေရာက မထ၊ ကျုပ်လဲ ပြီးသာပြီးသွားတယ် အာသာကမပြေ သလိုလို၊ သူ့အပြော နဲ့ အမူအယာကို ကြည့်ပြီး စိတ်က ပြန်ထလာတာမို့ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်ရင်း သူ့ခြေထောက်ကို ဆွဲမလို့ ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီကို သူ့ ဘိန်းမုံ့နဲ့ ကပ်ပေးလိုက်တယ်။
ခင်လှက ကျုပ်အဖြစ်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း ကျုပ်အလိုကျ ခြေမြှောက်ပေးတယ်။ သူလဲ မဝသေးတဲ့ပုံ။ ဘိန်းမုံ့နံ့ ရတာနဲ့ အန်ထားလို့ ခေါင်းစိုက်သယေယာင်ယောင် ဖြစ်နေတဲ့ ပြောင်ကြီးက ချက်ခြင်း ခေါင်းပြန်ထောင်လာတော့တာဘဲ။ ဒါမျိုးဆို ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီးက စိတ်ချရတယ်။ ၃ ချီလောက်တော့ မနားတမ်းခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့ကောင်။ သူ့ဘိန်းမုံ့ကို ပြောင်ကြီးလာထောက်တာနဲ့ ခင်လှဆီက “ဖြေးဖြေးအရင်လုပ်နော် ဦးမောင်လှကြီး… ခင်လှ မလုပ်တာအရမ်းကြာပြီ” “အေးပါ ငါသိပါတယ်ဟ” ကျုပ်လဲ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ခေါင်းထောင်နေတဲ့ ပြောင်ကြီးကို စိုရွှဲ ချွဲအိ နူးညံ့နေတဲ့ ခင်လှဘိန်းမုံ့ထဲ အသာဘဲ ဖိထိုးလိုက်တော့ ခပ်လွယ်လွယ်ဘဲ တထစ်ချင်းတိုးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ။ ဒီကောင်မ မလုပ်တာ အရမ်းကြာပြီ ပြောပေမဲ့ အပေါက်ကတော့ ပိတ်မနေ၊ ဧကန္တ သူ့လင် ထွန်းသောင်ကို သတိရတိုင်း ခရမ်းသီးနဲ့ စခန်းသွားနေလား မသိ။ သူ့အိမ်နောက်ဖေးမှာလဲ တနိုင်စာ ခရမ်းစိုက်ခင်းနဲ့။ အဆုံထိ ပြောင်ကြီးကို ထိုးသွင်းပြီး ခင်လှ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိလေးမှေးလို့ ပြုံးတုံးတုံး မျက်နှာပေးနဲ့ ပါးစပ်မပွင့်တပွင့်ဟလို့၊ ကြည့်စမ်း အပြည့်အဝ ကို အရသာ ခံနေတာ။ သူ့ပုံကြည့်ပြီး ကျုပ်တော်တော် အားတက်လာတယ်။ စောစောက မောတာတွေတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိ။ ဒါနဲ့ဘဲ ပြောင်ကြီးကို အသာဆွဲထုတ်လို့ ခပ်ဖိဖိလေး ထပ်သွင်းကြည့်တယ်။
ဒါလဲ ရှောရှောရှူရှူ ပလွပ်ကနဲ ဝင်သွားတာပါဘဲ။ လေး ငါး ချက်လောက် အသာစမ်းပြီး ကျုပ်အားပါတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ တန်းသွင်းတိုက်တာ ခင်လှ ပါးစပ် မပွင့်တပွင့်ကနေ ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး ဟ သွားတာဘဲ ရှိတယ်။ မျက်နှာပေးကမပြောင်း၊ မထီမဲ့မြင် မျက်နှာပေးနဲ့ ကျုပ်လုပ်နေတာ မမှု့တဲ့ ပုံမို့ ကျုပ် အသားကုန်ဘဲ မနားတမ်းဆောင့်ပေးလိုက်တာ ခင်လှ နို့အုံကြီးဆို ပင်လယ်လှိုင်းထနေသလို ယန်းလို့။ အဲဒီတော့မှ ခင်လှ ဆီက တအအ နဲ့ အသံထွက်လာပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လို့ မျက်စိပွင့်လာပြီး ကျုပ်ကို ကြည့်တယ်။ ကျုပ်ကလဲ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး လုပ်နေမို့ ချက်ခြင်းဘဲ အကြည့်ချင်း ဆုံတာပေါ့။
ကျုပ်လဲ မောနေတာမို့ ဆောင့်ချက်ကိုရပ်ပြီး အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလို့ သူ့ကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ပြီးသွားလို့လား” “အင်း… ဦးမောင်လှကြီး အရမ်းကြမ်းတာဘဲ” မျက်နှာပေးက ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ လေသံက မခံနိုင်တဲ့ လေသံမဟုတ်။ သဘောကျတဲ့လေသံ။ “မကြမ်းပါဘူးဟ.. ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့… ဒါတောင် ငါကလျှော့ထားတာဟ” ကျုပ်ကလဲ ပြောရင်း ဖြဲကားထားတဲ့ သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို စုလို့ ဘိုက်ပေါ် တွန်းတင်လိုက်တယ်။
ကြွတက်လာတဲ့ သူ့ဘိန်းမုံ့ကို တချက် နှစ်ချက်လောက် ဖိအဆောင့်မှာ “နားပါအုံးလား ဦးမောင်လှကြီးရယ်” ကြည့်ရတာ သူလဲ နားချင်ပုံဘဲ၊ ကျုပ်ကလဲ ခန နားချင်တာနဲ့ အတော်ဘဲ။ ခန နားပြီး နင်အပေါ်က စိတ်ကြိုက်လုပ် ဟုတ်လား လို့ပြောရင်း မနားခင် အဆစ်ယူတဲ့ သဘောနဲ့ လေးငါးချက်လောက် ဆက်တိုက်လေး ဆောင့်ပြီး သူ့ဘေးလှဲချလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးက အတွေ့ကြုံ ရှိပြီးသားမို့ အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့။ အခြေအနေက အားနာစရာလဲ မလိုတော့။ နှေးနှေးတလှည့် မြန်မြန်တလှည့်၊ နားလိုက် လုပ်လိုက်နဲ့ ခင်လှနဲ့ ကျုပ် ပုံစံမျိုးစုံ သုံးပြီး စခန်းသွားလိုက်တာ ညနေစောင်း အိမ်ပြန်တော့ ကျုပ်မှာ ဒူးတောင် ချောင်လို့။ ကျုပ်လဲ ခုမှဘဲ အဆင်ပြေသွားတယ်။ မအေးကိုလဲမေ့၊ သန်းမြ အကပ်မခံလဲ ဂရုမစိုက်တော့။ ခင်လှလောက် ကျုပ်အပေါ် ဘယ်သူမှ မကောင်းမှန်း ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်။ ပြီးပါပြီ